Blackmagic Design's New DaVinci Resolve Editor Keyboard na-ewuli Ederede Ọsịsọ Maka Ndị Okike Afọ | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Blackmagic Design's New DaVinci Resolve Editor Keyboard na-ewuli Ederede Ọsịsọ Maka Ndị Okike Afọ
Ihe ndị okike na-eme ga-abụrịrị ihe pụrụ iche ma ọ bụrụ na ọ pụtara, karịchaa, mgbe ha na-agwa ndị na-ege ntị ihe. Ọdịnaya na njirimara nke onye okike na-akwado nwere ihe dị mkpa. N'otu oge ahụ, Onye Okike kwesịrị iburu n'uche ọtụtụ ọrụ ngwaọrụ ụlọ ọrụ dịka Ntucha Blackmagic nwere ike inye aka gbooro ha mkpa ha ọ bụghị naanị iwepụta ụfọdụ ọdịnaya kachasị mma. Ma ndị na-ege ntị kachasị mma na njirimara ha nwere ike ịgwa ya okwu Ebe ahụ ka ọ dị Ntucha Blackmagic abata na foto a, ha na nke ohuru ha DaVinci Resolve Editor Keyboard, imepụta ọdịnaya ga-abụ usoro dị mfe iji jikwaa maka ọtụtụ ndị okike nwere afọ ojuju na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
Banyere Ntucha Blackmagic
Ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla Ntucha Blackmagic mepụta, n’abụghị nke anwansi, bụ ụfọdụ nke ngwaahịa nrụpụta vidiyo kachasị mma nke ụwa. Nke ahụ ziri ezi, kemgbe 2001, ụlọ ọrụ sinima dijitalụ emeputala ngwa ahịa sitere na
Igwe eji ese ihe dijitalụ
Ndị na-edozi agba
Ihe ntụgharị vidiyo
Live switchers na-arụ ọrụ
Ndị na-edekọ diski
Ndị na-ahụ maka waveform
Ndị na-enyocha ihe nkiri oge
Emebere ngwa ahịa ndị a maka ma otu ihe nkiri, izipupụta, na ọrụ mgbasa ozi telivishọn Otu ihe atụ nke Ngwa ahịa nke Blackmagic Design gụnyere kaadị njide ya nke DeckLink, nke bidoro ọtụtụ mgbanwe na ogo na ikike ị nwetụ ụwa nke nrụpụta. E gosipụtara ụdị mgbanwe a site na ntinye ụlọ ọrụ Emmy ™ na-emeri ngwaahịa ndozi agba DaVinci, bụ nke meriri ụlọ ọrụ telivishọn na ihe nkiri.
Ntucha Blackmagic ngwụcha ngwụcha nke mmebi ihe ọhụụ gụnyere ma ngwaahịa 6G-SDI na 12G-SDI, yana stereoscopic 3D na Ultra HD na-arụ ọrụ. Ma na ọhụrụ DaVinci Resolve Editor Keyboard, okporo ụzọ ha maka ihe ịga nke ọma ga-aga n’ihu.
Ntucha Blackmagic'DaVinci Resolve Editor Keyboard
BlackVagci Design's DaVinci Resolve Editor Keyboard agabigaghị na nke a dị mfe keyboard. Emebere Keyboard a ka ọ bụrụ ngwaọrụ ndozi ọzọ, nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ọfụma karịa ngwa ngwa. N'ụzọ bụ isi, DaVinci Resolve Editor Keyboard nwere ike inyere ndị ahịa aka n'otu oge n'otu oge, ọ nwere ike inye ha ọkpụkpọ ọchụchọ aakọtara arụpụtara nke etinyere n'ime keyboard.
Blackmagic's DaVinci Resolve Editor Keyboard nwere ụdị ihe eji igwe rụọ, nke kachasị sie ike ma nke a bụ nsonaazụ ma ọ bụrụ na a na-eme ya maka ndị editọ ọkachamara na-ewepụta ụbọchị ha na-edezi oge na awa, nke doro anya na ọ ga-ebute arịrịọ maka isi keyboard edozi. Igodo nke igodo ya nwere ihe ndi ozo eji eme ha, nke a na - eme ka odi nfe ka onye oru di ya nma. Igodo ngbanwe ahụ bụ otu ụdị nke bọọdụ eSports na-eji ma ọ bụ akara ọ bụla enyerela ihe karịrị otu nde ọrụ. Ejiri igwe na - eme ihe ejiri igwe ihe siri ike mee ya ma na - enyere ya aka idozi ya nke oma. Ọzọkwa, mkpịsị ugodi, aka aka, na igodo ngịga dị niile dị ka ihe ndozi, na ụzọ ahụ enwere ike ị nweta ume ma dozie keyboard ahụ ka oge na-aga.
The DaVinci Resolve Editor Keyboard's ọsọ bụ ndị ahịa dị mkpa ka ha wee nwee ike iji aka abụọ mee ihe mgbe ha na-edezi. Ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ iji aka nri ha wee chịkwaa ọnọdụ ahụ na mpịakọta, ebe aka ekpe ha na-etinye ma na-akọwapụta nke ọma yana itinye ntinye ma ọ bụ nke ọzọ, yabụ enweghị mmachi keyboard ọgbara ọhụrụ na-egbochi ime ya. Na DaVinci Resolve Editor Keyboard ndị ahịa nwere ike ịgagharị, kaa akara ma pụta, tinye ntụgharị, wee kwaga ọzọ, ugboro ugboro, otu na-eso ya, ọzọ.
Alkpọ oku a na-achọta n’ime keyboard ahụ bụ igwe nwere roba roba, nke a na-eme ka ọ dị mma nke ukwuu maka ndị ọrụ, ha ga na-eche mgbe niile na ha nwere njikwa siri ike na clip ma ọ bụ usoro iheomume DaVinci Resolve. Enwekwara mgbakwunye elektrọnikị agakọtara na -emepụta njedebe nkwụsị mgbe eji ya maka ụgbọ ala na ọnọdụ, niile dị n'okpuru njikwa ngwanrọ. Na ọtụtụ njigide ndị na-agba ọsọ, ọkpụkpọ ọchụchọ dị mma nke ukwuu ma enwere ike ịkọ ya na ọnọdụ jog iji nye ohere mpịakọta usoro iheomume.
Ogodo Editọ ahụ tinyekwara igodo igodo ederede degharịrị, nke emelitere site na iji nzaghachi ndị edemede ndị ọkachamara. N'agbanyeghị nke a, ndị ọrụ ka ga na-enwetara atụmatụ ọdịnala ọdịnala ọ bụla maka ibe ma ebipụ ma dezie ya na DaVinci Resolve, yabụ akụkụ akụkụ akụkụ nke keyboard ahụ ka na-arụ ọrụ ọfụma. A na-etinye ụdị ntụzi ọkọlọtọ niile na keyboard. Mana ndị ahịa ka na-enwetara ọhụụ na nyizigharị edegharị, nke a na-agụnye bọtịnụ ihe ga-enye ohere maka mgbanwe ngwa ngwa na ihu ihu zuru oke. Na DaVinci Resolve Editor Keyboard ọbụlagodi na o kwere omume degharịa ya na keyboard na ihu ihu zuru oke
Na mgbakwunye na nkọwa DaVinci Resolve Editor Keyboard's atụmatụ, Ntucha Blackmagic Onye isi ala Grant Petty kwuru, sị: “Anyị na-eche na nke a bụ ngwaahịa na-enweghị atụ dị egwu n'ihi na ọ nwere ihe egwu dị egwu oruru mmiri. Petty gara n'ihu ikwu Ruo ọtụtụ afọ, a na-elezi ịhazizi edoziri anya dị ka ihe mgbe ochie, ma ugbu a, anyị ejikwala uru ndị a maka ịhazi ọgbara ọhụrụ ọgbara ọhụrụ. Enweghị m ike ikwenye na ọ dịghị onye ọzọ echebarala nke a mbụ ma nwee ike ju anyị anya na ọsọ anyị nwere ike ịrụ edezi mgbe ị na-eji aka abụọ dị na Keyboard DaVinci Resolve Editor Keyboard! ”
Otutu nke DaVinci Resolve Editor Keyboard Akụkụ gụnyere:
Ihe eji eme igwe eji eme ka aru karie ike
Na-enyere aka ịdezi ngwa ngwa karịa ekwe omume na ngwanrọ NLE
Njikwa oku ejikọtara
Isi iyi teepu na-enye ohere ịchọ ngwa ngwa ngwa ngwa
Bọtịnụ ka ịhazie bọọlụ n'otu ntabi anya
Nnukwu mkpụbelata na mpụta bọtịnụ
Keyboardzọ keyboard ọhụrụ maka ndozi ọgụgụ isi
Bọtịnụ iji mee ka ọkpụkpọ ọchụchọ chọọ ka ọ dị belata
Bọtịnụ ka ị gbanwee ụdị mgbanwe
Czọ mkpirisi keyboard DaVinci Resolve keyboard ka nma
Ahụ igodo maka ntinye uzo uzo oge abuo
Enwere ike itinye ya n’ime olulu apịpụtara na dezie consoles
Maka ozi ndị ọzọ na DaVinci Resolve Editor Keyboard, gaa www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/edit.
Ihe Mere O ji aga Ntucha Blackmagic
Na mgbakwunye inwe ụfọdụ ngwaahịa ndozi vidiyo dị elu, Ntucha Blackmagic nanị na-eme ka ahụmịhe sinima bụrụ ihe na-atọ ụtọ karịa maka ndị mepụtara ọdịnaya na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi yana ndị na-ege ha ntị. Na agbanyeghị ma onye mgbasa ozi na-achọ igwefoto ihe nkiri dijitalụ, ndị na-agbanwe ndụ na-ebi ndụ, ma ọ bụ naanị ndị na-anya ụgbọ elu, ha agaghị enwe obi mgbawa na njiri mara mma nke ọrụ ahụ. Ntucha Blackmagic na - arụpụta dị ka akụkụ nke ọrụ ya iji nyere ezi okike ekewa.
Maka ozi ọzọ na Ntucha Blackmagic, nleta www.blackmagicdesign.com/.
Kacha ọhụrụ posts site Andres Benetar (-ahụ ihe niile)
DekTec's New Quad 3G-SDI / ASI PCIe Kaadị Nwere Ike stmalite Mmepụta vidiyo na Nkesa Maka Ndị Mgbasa Ozi - May 24, 2020
Draco vario ultra HDMI 2.0 Na -eweta Nkesa vidiyo dị elu - May 24, 2020
Igwefoto igwefoto ohuru nke B & H na-eme ihe osise - May 15, 2020
6G-SDI na 12G-SDI Ntucha Blackmagic ụlọ ọrụ mgbasa ozi Ndị na-edozi agba content Mmepụta Ihe DaVinci ngwaahịa agba agba agba DaVinci Resolve Editor Keyboard Kaadị njide DeckLink ụlọ ọrụ sinima dijitalụ Igwe eji ese ihe dijitalụ Ndị na-edekọ diski mma nkiri Grant Petty Live switchers na-arụ ọrụ post mmepụta Ndị na-enyocha ihe nkiri oge routers ụlọ ọrụ mgbasa ozi telivishọn Ihe ntụgharị vidiyo vidiyo na-edezi vidiyo nlekota oru vidiyo Ndị na-ahụ maka waveform 2020-05-10
Previous: N'ime imepụta ihe nlere na ihe nkiri vidio na emeputa
Osote: Enyemaka aka